BBC Learning English - Course: English Expressions - Afaan Oromoo / Unit 1 / Session 18 / Activity 1
Har’a, akkaata ibsannoowwan Afaan Ingilizii ‘A sticky situation’ haala keessaa bahuun rakkisaa ta’e jehdu ilaalla. Hiiknisaa maal sitti fakkaata…? Hinbarree? Tole, caqasi.
Roobiifi Feffee caqasi. Feffeen istuudiyoo keessa jirti; Rob garuu wayita inni gara hojii deemutti halli keessa bahuun rakkisaa ta’e ‘a sticky situation’ itti uumamee jira - maaltu ta’e? Haala gaariimoo gadhee ture? Maaliif £10 barbaada?
Rob dubartii istuudiyoo isaa alatti argamtu tokko waliin walitti bu’e ‘bumped into’. Kanaafuu gatii meeshaa manca’ee baasuuf ‘pay for the damage’ qaba. Wanti Feffeen £10 akka leqeessituuf barbaadeefis kanuma. Waan Feffeen goote hubachuuf caqasi.
Feffeen Roobiif £10 leqeessiteefi jirti. Kanaaf haala ‘sticky situation’ keessaa bahuu ni danda’a jechuudha.
‘Sticky’ jechuun kan keessa bahuu hindandeenye jechuu yoo ta’u ‘situation’ jechuun haala. ‘A sticky situation’ haala ulfaataafi akka salphaatti keessaa bahuufi furmaata itti laachu hindanda’amneedha. ‘A situation’ haalichi ‘sticky’ kan keessa hinbahamne ta’uun sababiinsaa ‘stuck’ keessatti qabamtee waan jirtuufi - keessaa bahuun salphaa miti kan jedhamu. Gara Roobitti yoo deebinu, haala keessa bahu hindandeenyeen kan keessa ‘sticky situation’ bahuuf maalaqa kafaluutu irra ture. Haa ta’u malee furmaata fiduuf yeroo hundaa maalaqa kaffaluun namarra hinjiru; dhiifama gaafachuu ta’uus ni mala. Kunis ofiis ta’e namoota biroon akka si gargaaran gochuun nama sanatti haasa’dha. ‘Sticky situations’ tokkoo tokko keessaa bahuf yeroo inni itti dadhabamuu maluus ni jira
Ibsannoon kun yeroo heddu gochama ‘to be’ waliin fayyadamuun ‘It is a sticky situation’ yookaan ‘to be in’ waliin ta’uun ‘He is in a sticky situation’ jedhu fida. Jechamoota akka ‘get into’ fi ‘get out of’ jedhamanii waliinis fayyadamu ni dandeessa.
Fakkeenyawwan gaalee kanaa muraasa dabalataan haacaqasnu…..
Roob torban ittaanuttis haala walfakkaatuun ‘sticky situations’ keessa akka hingalle nan abdadha. Takkaa ‘sticky situation’ keessa galtee beektaa? Maaltu sirra gahe? Akkamiin sirra gahe? Akkamiin furmaata argateef? Barnoota dabalataa English Expressions yeroo ittaanutti walitti deebina. Nagaatti!
Kalattiin haala keessaa bahuun rakkisaa ta’e jechuu miti.
Haalli keessaa bahuun rakkisaa ta’e danqaadha.
Kun haala jalqabarra ykn xumuraa utuu hintaane haala waliigalaa kan ibsuudha.